नेपालगञ्ज उपमहानगरद्वारा किसानलाई उन्नत जातका धानको बीउ वितरण - मध्य पहाड
नेपालगञ्ज उपमहानगरद्वारा किसानलाई उन्नत जातका धानको बीउ वितरण
Posted on ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २१:१० - ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार २१:१० by Madhya Pahad
बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरक्षेत्रभित्रका किसानलाई सहुलियत दरमा उन्नत जातको धानको बिउ वितरण शुरु गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण शुरु गरेको हो ।
नगर प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले शुक्रवारदेखि शुभारम्भ गरेको कार्यक्रम केही दिनसम्म चल्ने छ । किसानलाई झण्डै १६ मेट्रिक टन धानको बीउ वितरण गर्न लागिएको छ । ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्ने भएपछि धानको बीउ लिन किसानहरुको लाम लागेको छ ।
किसानको आवश्यकतानुसार कम्तीमा ३५ किलोको एक बोरी धानको बीउ उपलब्ध गराउने गरिएको छ । राधा–४, रामधान, बहुगुणे–२ र सावा मन्सुरी सबवन गरी चार किसिमका धानका बीउ वितरण भइरहेको उपमहानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।
अरब सागरको ‘ताउ-ते’ सामुद्रिक चक्रवातका कारण नेपालगञ्जमा तीन दिनसम्म परेको अविरल झरीपछि यहाँका किसान धानको बेर्ना रोप्न जुटेका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार नेपालगञ्जसहित बाँके जिल्लाभरि यस वर्ष ३६ हजार हेक्टरमा धान खेती हुने आकलन गरिएको छ ।
शुरुआती चरणमै राम्रो वर्षा भएकाले रोपाइँ सप्रने अपेक्षा गरिएको छ । यहाँ उत्पादन भएको आधा धान चामलमा परिणत गरी कर्णाली लगायत विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुँदै आएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
नेपालगञ्जसहित बाँके जिल्ला धानबालीमा अत्मनिर्भर भएको जिल्ला हो । जिल्लाका अधिकांश किसानका लागि धानबाली मुख्य आर्थिक स्रोतका रूपमा रहेको छ । धानको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि यहाँ धान ब्लक, धान पकेट तथा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि लागू भएको छ । यो कार्यक्रमले पनि धानको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने बताइएको छ ।
यसका साथै यहाँ यस वर्षदेखि सिँचाइ सुविधा उपलव्ध भएका कारण पनि धानको राम्रो उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले किसानका अधिकांश खेतमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको छ ।
विगतमा आकाशे पानीको भरमा धान खेती हुँदै आएकामा आयोजनाले नहरमा पानी छोडेपछि बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाका खेतीयोग्य जमीन हराभरा हुँदै आएका छन् । रासस
This entry was posted in प्रदेश ५, बजार, मुख्य समाचार, समाचार, समाज and tagged by Madhya Pahad. Bookmark the permalink.
← एमाले एकता जाेगाउन देउवाकाे पक्षमा हस्ताक्षर गरिन : याेगेश भट्टराई
दूल्लू नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण →